Zodiac-ka Esna & Sphinx ee calaamadda zodiac-ku bilaabmay - Injiilka oo ku qoran af-soomaali
Zodiac waa saadaalin wareeg ah oo xiddigaha. Sidee loo calaamadeeyaa bilowga goobada? Laakiin macbadka Esna, oo u dhow Luxor Masar, wuxuu muujinayaa Zodiac si toos ah. Zodiac-ka Esna wuxuu ina tusayaa sida ay dadkii hore u calaamadin jireen bilawga iyo dhammaadka Zodiac-ka. Hoos waxaa ku yaal Zodiac-ka Esna, oo muujinaya xiddigaha Zodiac oo u socda socodka midig ilaa bidix ee heerka hoose iyada oo socodka baaskiilka ee heerka sare uu ka socdo bidix-ilaa-midig gadaashiisa, oo raacaya fallaadho-u-rogid.
Zodiac toosan oo ku yaal Portico of Temple ee Esna. Xiddigaha Zodiac waxay ku wareegsan yihiin casaan. Sphinx (oo ku wareegsan cagaar) ayaa madax ka ah socodka Zodiac. Virgo ayaa bilawday socodka, Leona waa ugu dambeeyay.
Sphinx ayaa madax u ah socodka xiddigaha. Sphinx hab ‘in la isku xidho’ oo waa madax dumar ah oo ku dheggan jidh libaax. Si toos ah u raacaya sphinx ayaa timaad Virgo, oo ah ururkii ugu horreeyay ee socodka zodiac. Xiddigaha Burjigu markaas waxay raacaan Virgo siday u kala horreeyaan oo leh ururkii ugu dambeeyay, ee bidixda sare, isagoo ah. Leo. Zodiac-ka Esna wuxuu muujinayaa halka uu burjigu ka bilaabmay (Virgo) iyo halka uu ku dhammaaday (Leo).
Array of Sphinxes – Madaxa haweeneyda ee jirka libaaxa, kan ugu horreeya & kan ugu dambeeya ee Zodiac
Waan awoodnaa akhri Sheekadii Zodiac-kii hore ee ka bilaabma Virgo iyo dhamaadka Leo.